जनार्जन पौडेल। गायिका भूमिका गिरी रामजी खाँडलाई झिम झिम गर्ने नसालु आँखामा लुकाईराख्न भनिरहेकी छिन् । तर यो उनको वास्तविक जीवनमा नभई उनीद्धारा बजारमा ल्याएको एकल एल्वममा रहेको गीतको बोल हो । यूवा पुस...
‘सेक्स सामान्य हो मन मिल्यो भने म ओके भन्छु’
तपाईंको नामको अर्थ के हो ? प्रकाश । ज्योति मगर र सनी लियोनको अंग प्रदर्शनमा के फरक छ ? सनीलाई विश्वले चिन्छ, मलाई नेपालीले मात्र । सबै नारी एकैनासका हुँदैनन् । मैले सनीले जस्तो देखाउनै नहुने कु...
यो दृश्य एनएफडीसी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको हो । गत शनिवार राजधानीको ह्यात होटलमा सम्पन्न अवार्ड समारोहमा विपिन कार्कीले फिल्म ‘जात्रा’ का लागि उत्कृष्ट अभिनेता र प्रियंका कार्कीले...
काठमाडौं १ असार । स्टार इन्टरटेनमेंन्टले मिस टिन प्लस टु २०१७ सिजन ३ नामक सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । राजधानी स्थित होटल रानी महलमा करिव २२ दिने प्रशिक्षण पछि १५ युवतीहरु अन्तिम प्रतिस...
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा खाडी मुलुकमा दुख गरेर नेपाल फर्किका दिपक थापा मगर यतिवेला साङगीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा बटुल्दै आएका छन । विदेशी भूमीमा दुःख गर्नु भन्दा स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भनेर उ...
चलचित्र ‘मेरी कुसुम’ ले दुवइमा ब्यापक चर्चा कमाएको छ । चलचित्र मेरी कुसुम जुन १६ तारिखका दिन शुक्रबार दुबई शहरको बुर दुबई मा अवस्थित शिन्दाघा सिटी सेन्टर मा रहेको भक्स सिनेमा लगायत विभिन्न हल हरुमा पु...
पछिल्लो समय ‘मनमा’ एल्वमबाट एकाएक चर्चामा आएकी गायिका बसन्ता प्रकृति दिनदिनै व्यस्त भइरहेकी छिन् । सुमधुर स्वरकी धनी,सबैसंग छिट्टै घुलमील हुने र सबैको प्यारो गायिका बसन्ता विशेष गरि युवापुस्तामाझ लोक...
मदनको हातमा एक पछि अर्को चलचित्र
निर्देशक मदन घिमिरे एक पछि अर्को चलचित्र निर्देशन गरिरहेका छ । “व्वाई फ्रेण्ड ”चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा रहेका बेला कमेडी चलचित्र “काउसो ” चलचित्रको पनि छायाँङ्कन सकेर सम्पादन कार्यमा रहेको छ । त्यस...
गाईका सविना शेर्पाले आफ्नो दोश्रो पोई अर्थात श्रीमान सार्वजनिक गरेकी छन् । तर यो घटना उनको वास्तविक जीवनमा नभई म्युजिक मार्फत भएकोे हो । कृष्ण कंडेल र सविना शेर्पाको गिति एल्वम दोश्रो पोई हालसालै ...
‘हे मोरी’ बोलको नयाँ गीतको भिडियो लिएर आएर गायक सुजेश वैद्य
काठमाडौँ । गायक सुजेश वैद्यले ‘हे मोरी’ बोलको गीतको भिडियो युटुबमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘ग्लुमी गाइज’ व्याण्डका गितारिष्ट सुजेश वैद्य लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका वैद्यले भिडियोमा पनि ...
‘दोस्रो विहे गरेर गल्ती गरें’ : भुवन केसी
बिहिबार, जेष्ठ ११, २०७४
कुनै जमाना थियो, नेपाली चलचित्रमा भुवन केसीको राज चल्थ्यो । उनको स्टारडम बिक्थ्यो । आज भुवन हिजोको ब्याजमै चलिरहेका छन् । चलचित्रको नयाँ ट्रेन्डमा उनको अभिनय शून्यप्रायः छ । बरु उनी फिल्म बनाउने, निर्...
रुकुम । रुकुममा रहेर बिगत १३ बर्षदेखी पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार धनवीर दाहालको अर्काे देशभक्ति गीत बजारमा आएको छ । दाहालले नयाँ नेपाल नामक गित हालै मात्र बजारमा ल्याएका हुन् । नयाँ नेपाल बनाउनलाई ह...
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको मेयर – उपमेयरमा एमाले उम्मेदवार विजयी
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका एमालेले जितेको छ । एमालेका मेयर उम्मेदवार सञ्जु पण्डित ९७१६ मतका साथ विजयी बनेका हुन् । उपप्रमुखमा एमालेकै गीता दाहाल विजयी भएकी छन् । दाहालले ९१२४ मत पाइन् ।...
अभिनेत्री रिमाको निधन
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री रिमा लागूको मुम्बईस्थित कोकिलाबिन अस्पतालमा बिहीबार बिहान निधन भएको छ । ह्रृदयघात भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएकी ५८ वर्षीय अभिनेत्री लागू,‘कुछ कुछ होता हैं’, ‘हम आपके हैं कौन’ ...
करिष्माले भोट हाल्न पाइनन, पतिप्रति सार्वजनिक आक्रोस
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएपछि अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले आफ्नै श्रीमानप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । राजधानीको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम नभएका कारण मतदान गर्न नपाएको रिस पति विनोद ...
पूर्व युराज्ञी हिमानी सपरिवार सहित हल सम्म पुगिन ‘बाहुबली टू’ हेर्न
काठमाडौं । पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह सासू कोमल शाह र छोरी पूर्णीकासँग ‘बाहुबली टु’ हेर्न हलसम्म पुगेकी थिईन् । शुक्रबार बेलुका विकेन्ड मनाउने हिसाबले हिमानी सुन्धारास्थित सिटिसी मलमा उक्त फिल्म हेर्न...
‘बाहुबली २’ ले तोड्यो भारतीय फिल्मका सबै रेकर्ड
काठमाडौं । दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘बाहुबली २’ रिलिज भएको एक सातामै भारतीय फिल्मका धेरै रेडर्क तोडिसकेको छ । रिलिज भएको छैटौं दिनमा ‘बाहुबली २’ आमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ले कायम गरेको सर्वोच्च रेकर्ड पनि त...
काठमाडौं । कटप्पाले बाहुबलीको किन मारेको भन्ने जान्न नचाहने सायदै कमै होलान् । बाहुबली फिल्मको यो राज जान्नको लागि ‘बाहुबली द कन्क्लुजन’ हेर्नेको भिड हलहरुमा देख्न सकिन्छ । तर यही राज जान्नको लागि प्ल...